Tag: nyocha | Martech Zone
Tọzdee, Machị 5, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Ọnụ ọgụgụ aka ị na - emekọrịta n'etiti ndị ahịa - na ụzọ ha si ezute ụdị gị - agbawaala n'afọ ndị na - adịbeghị anya. N'oge gara aga, nhọrọ ndị dị mfe: ị na-agba ọsọ mgbasa ozi, mgbasa ozi na-agbasa ozi, ma eleghị anya ozi ozugbo, ma ọ bụ nchikota. Taa enwere ọchụchọ, ngosipụta n'ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịta, ekwentị mkpanaaka, blọọgụ, saịtị nchịkọta, na ndepụta ahụ na-aga n'ihu. Site na mmụba nke isi ndị ahịa na-ebute abịa elebara anya nke ukwuu
Anyị enyela nkọwa nke nchịkọta yana edepụtara niile nyocha ịntanetị ị nwere ike ịchọta iji nyere gị aka iji tụọ mmetụta nke usoro azụmaahịa gị. Dịka ị pụrụ ịhụ site na ụfọdụ ọnụọgụ dị n'okpuru, agbanyeghị, ndị ahịa na-aga n'ihu na-agbasi mgba ike na nhọrọ nchịkọta ha na nsonaazụ ha. Ekwenyere m na isi ihe a bụ na nchịkọta na-enyekarị ọtụtụ ozi, na-enweghị inye ndụmọdụ ọ bụla maka azịza. Dị ka
Kpamkpam hụrụ ozi sitere na Woolworth onye na-ere ahịa na South Africa. Onye nchịkọta akụkọ Digital Sam Wilson na-atụle otú ngwaahịa ndị Socialbakers, Analytics na Builder si mee ka ndị otu ya nwee ike ịbịnye akara aka ma nyefee ndị isi ụlọ ọrụ nghọta siri ike. Atụmatụ Woolworth karịrị nanị ị listeninga ntị na ịzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi. E nwere ihe 4 ndị ọzọ Sam kwuru banyere ha nke nyeere ha aka ịga nke ọma, ma na mpụga ma na-edu ndú ha. Nyocha - ịnweta iberi na dais
A na-akpọ infographic a Ntuziaka Ntuziaka maka SEO Automation, mana ọ bụghị n'ezie maka akpaaka, ọ bụ ihe gbasara usoro achọrọ iji melite nsonaazụ ọchụchọ engine gị na atụmatụ na-aga n'ihu. Akụkụ nke usoro nwere ike akpaghị aka… ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe dịka ịzụrụ na akpaghị aka backlinks, ụlọ ọrụ gị na-aga maka nsogbu. Ihe ochicho njini ka bu ihe ntughari aka nke choro ka ichoro otutu nyocha, bulie ọdịnaya gi.